बिचार/विश्लेषण – Page 47 – JanaSanchar.com
करिब ७ दशकको अथक प्रयासपछि नेपालले संविधानसभामार्फत संविधान पायो । जेजस्तो रूपमा भए पनि यसलाई उपलब्धि मान्नेको संख्या नेपालमा आज पनि ठूलै छ । यससँगै, हामीसँग केही अप्ठ्यारा प्रश्न पनि सतीसालझैं उभिएका छन् । ६ महिना पनि टिक्न नसक्ने संविधान बनाउने संविधानसभाको मागमा हामीले सात दशक किन खेरा फाल्यौं त ? हजारौंको बलिदान किन चढायौं ?लाखौं..
राजनीतिका ७ परिदृश्यः पश्चागामीको एकतादेखि सरकारको अकर्मन्यतासम्म
परिदृश्य नं. १ संसदको गत्यारोध संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित भएको यो संसदको अवधि आगामी ७ माघ ०७४ सम्म मात्रै छ । सो अवधिभित्र संसदले संविधानसंग वाझिएका कानुनहरुको संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसैगरी संघीयतामा मुलुक गएपछि संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरुको निर्माण अनिवार्य छ । आजका मितिसम्म पनि निर्वाचनका लागि नभै..
किन छाने साम्राज्यवादीले युद्धका लागि पुष्पकमल–बाबुराम ?
माओवादीको आवरणमा भएको १० बर्षको युद्ध ‘चमत्कारिक’ रुपमा जसरि विस्तार भयो, त्यस्तै तिब्रताका साथ बिल्कुलै ‘हास्यास्पद’ रुपमा विसर्जन पनि भयो । यो समग्र नाटकीय प्रक्रियालाई हेर्ने हो युद्धको उत्थान र विसर्जनका दुई दशकहरु स्वाभाविक विकास प्रक्रिया होईनन् भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ । युद्ध सञ्चालनका लागि आश्रयस्थलका रुपमा छनौट गरिएको..
षड्यन्त्रको अनेक पाटो
अहिलेको असाधारण र अनिश्चित राजनीतिबाट मुलुकलाई निकास दिने क्षमता वर्तमान नेतृत्वले राख्दैन भन्नेमा जनसाधारण आश्वस्त छन् । तर सत्ताको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू आफ्नो ‘अडान' मा रहँदा संवाद र समाधानको सम्भावना लगभग ‘शून्य' नै देखिन्छ । तर नेताहरूका अभिव्यक्ति मुलुकको अस्तित्व र तीन करोड नेपालीको भविष्यप्रति उनीहरू पूर्णतया..
मधेसी नेतृत्वमा मनमुटाव
नेपाली राजनीतिमा मधेश आन्दोलनको आयतन निरन्तर बढ्दो छ। तर, बेला–बेलामा हुने निर्वाचनमा मधेशी दलहरूको सिट संख्यामा अप्रत्याशित घटबढ हुने गर्छ। ०१० सालयता एकपछि अर्को मधेश आन्दोलन भए । हरेक आन्दोलन अघिल्लोभन्दा बलियो र शक्तिशाली देखियो। २०१३ सालमा तराई कांग्रेसले गरेको ‘सेभ हिन्दी’ नामक भाषा आन्दोलन, ०४२/०४३ देखि सुरु भएको सद्भावनाको..
अंगीकृतलाई प्रधानमन्त्री दिंदा समस्या भोगेको फिजिबाट सिक्ने कि ?
राज्यले नागरिकताबाट सदस्यता प्रदान गर्दछ । नागरिकले पनि राज्यबाट संरक्षणको दायित्व प्राप्त गर्दछ । नागरिकता राज्य र नागरिक बिचको सम्झौता हो । यसले शासन प्रकृयामा भाग लिने अधिकार प्रदान गर्छ र राज्य शक्तिको मार्ग प्रसस्त गर्छ । त्यस्तै भूगोलको सीमाभित्र बस्न पाउने वैद्यता पनि यसले प्रदान गर्दछ । अमेरिकि अनुसन्धानकर्ता फेहरिक गेजका..
भारतीय डिजाइनमा स‌ंविधान संशोधन प्रस्ताव
सरकारको काम कारवाहीले देशमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न तथा देशको सार्वभौमिकता एवं स्वाधीनता रक्षा गर्न मद्दत गर्ने हुनुपर्छ । सरकारले मंसिर १४ गते संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको लागि भनी दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकका विषयहरुकोकारण अहिले देशभरि जनताको विरोध भइरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा२७४(१) मा नेपालको सार्वभौमिकता..
नेताहरूको अक्षमता र राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा पहिलो संविधानसभा आफ्नो लक्ष्य पूरा नगरी असफल भयो । गैरसंवैधानिक तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूर्व प्रशासकसम्मिलित सरकारले गराएको दोस्रो चुनावबाट बनेको संसद्को आयु पनि २०७४ माघ ७ गते समाप्त हुँदैछ । यसले गर्नुपर्ने काम भने थुप्रै छन् । ०७४ माघ ७..
प्रचण्डको पाँचौं महाभूल !
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' यतिखेर अत्यन्त अस्थिर देखिन्छन् । उनी यति उद्वेलित देखिएका छन् कि कतिखेर के गर्ने भन्ने नै ठम्याउन सकिरहेका छैनन् । यसै साताको सुरुमा उनी वीरगन्ज गए । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी गएर उद्घाटन गरेको योग शिविरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन गएका होलान् ? त्यसको सन्देश देश/विदेशमा के जान्छ ? न उनलाई यसबारे..